IZIPHO ZOMTSHATO EZINGAMA-28 ZOMTSHAKAZI EZIVELA KWIQABANE LAKHE ELIZAYO - IFASHONI
Eyona Ifashoni I-28 yeZipho eziPhambili zoMtshato zokunika uMtshakazi wakho
I-28 yeZipho eziPhambili zoMtshato zokunika uMtshakazi wakho
Ngaba ucwangcisa usuku olukhulu lotshintshiselwano? Yothusa iSO yakho ngento ekhethekileyo. Imveliso yeC & W yokuFota kunye neFilimu nguMarie Canieso
Ukuhlaziywa ngoJuni 19, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Njengombono we isibini sokutshintshiselana ngesipho ? Hayi, kuninzi ukuthanda! Ukutshintsha izipho kunye neqabane lakho yenye yeendlela ezininzi ezimnandi zokubhiyozela usuku lomtshato kunye nesi sahluko sitsha sobomi bakho. Yenze ngaphambi kokuba 'ndiyenze ukukhawulezisa iimbilini zomnye nomnye. Okanye, linda de kube kugqityiwe ukwamkelwa- kufana nendawo yokukhuza ngomhla osele uthandeka. Nokuba kunjalo, lixesha lokuba ufumane into ekhethekileyo oza kuyinika iqabane lakho elizayo. Ezi zipho zomtshato zizodwa ziya kukunceda wenze isiko libe lelakho.
Siza kukhaba izinto ngesi sipho somtshato siyilahle ikamva lakho umfazi . Isitshixo esimilise emvulophini siza sifakwe ileta encinci yesinyithi-ileta onokufumana kuyo inqaku lothando oluqhelekileyo! Uya kothuka xa eyivula ukuze afumanise ukuba yintoni na ngaphakathi.
Uyilo lukaTracy Tayan Imvulophu yomqala weleta, ukusuka kwi- $ 66, Etsy.com
uyicoca njani iringi yakho yomtshato
Bhiyozela usuku owahlangana ngalo okokuqala, umhla awaba ngowakho umntu oza kutshata naye kwaye umhla oya kutshintshisa ngawo izifungo zomtshato zonke kwisipho esinye esithandekayo. Oku kugcina ukuhonjiswa kunemephu ezintathu ezibonisa indawo yelizwe ngalinye.
Ubugcisa beMephu zaMhlanje Isipho somtshato wesipho somtshato, ukusuka kwi- $ 60, Etsy.com
Nika umtshakazi wakho amacici amahle anokuwanxiba ngosuku lomtshato. (Qiniseka nje ukuba ubucwebe ohamba nabo kunye nalo lonke iqela lakhe- kwaye ukuba akasacwangcisanga ukunxiba isibini esahlukileyo! into eblue ? Bahle kakhulu, banokudlula nje njengendlalifa yentsapho yomtshato. (Nangona singamsoli ukuba ufuna ukugcina i-baubles yonke kuye.)
UMlambo iNayile isafire namacici edayimane, $ 2,900, BlueNile.com
Ukuba ebejonge iibhatyi zomtshato Kwi-Instagram nakwiPinterest, umothuse ngoyilo lwesiko lakhe. Yeyakho le jean ibhatyi ukuze abonise ngobume bakhe bomtshakazi ngekratshi. Yeyona nto ifanelekileyo yokuphosa imifanekiso yomtshato opholileyo, ungasathethi ke ngomnyango omkhulu wolwamkelo okanye ophumayo.
Umtshakazi kaBrodie Nkosikazi isiko ledenim lomtshakazi, $ 98, Etsy.com
Ukukhangela isipho somtshato esinomdla kakhulu kumtshakazi wakho? Awungekhe uhambe gwenxa nge-albhamu yezithombe zakudala. Gcwalisa le ncwadi ye-luxe kunye nexesha elibonakalayo lobudlelwane bakho ukuza kuthi ga ngoku. Yindlela entle yokujonga indlela enize ngayo nobabini apha- kunye nokonwaba ngakumbi ngazo zonke iinkumbulo ezisaza kuzenza.
Ukuvuswa kweArtifact incwadi yemihla ngemihla, ukusuka kwi- $ 59, ArtifactUprising.com
Ukuba ukhutshiwe malunga nokutshata njengosuku lomtshato uqobo, lungiselela umfazi wakho wangomso kuhambo lwakho ngokunika izincedisi zakhe zokuhamba. Umthengisi we-Etsy yenza isitayile, iimeko eziqinileyo ngokuprintwa okumnandi ngokwenene. Sinomkhethe kuyilo oluphefumlelweyo lwesundu lokubaleka tropical.
I-R-KI-TEKT Iphepha lokundwendwela lesikhumba kwiPalm Print, i- $ 55, Etsy.com
Iidayimani kunye neeperile zezona zimbini zezona zinto zithandwayo zokuhombisa ubucwebe, kwaye le bhanti entle, engenasiphelo inezo zinto zombini. Umtshakazi wakho unokuyinxiba ngosuku lomtshato okanye ngokwenene, nangaluphi na usuku emva. Ihliswe ngokwaneleyo ukuba ibe sisiqwenga sokutya.
UMATEWU 14k pearl yegolide kunye nesacholo sedayimane, $ 475, MATEONewYork.com
Isipho sakho kumtshakazi ngokuqinisekileyo akufuneki sigqobhoze ibhanki. Yomeleza ukuzithemba kwakhe ngale 'molo mhle' ngesipili esihlangeneyo. Sisipho esincinci kodwa esikhethekileyo esiza kuluncedo ngelixa elungiselela. Kwaye ngokudibanisa nje kancinci, unokufumana okroliweyo wangasemva.
Ivenkile yeKnot eyenzelwe wena ebhalwe ngesikhumba esibukhali esidityanisiweyo esenziwe kwi-Hello Gorgeous, ukusuka kwi- $ 12,
Iiflasks ziya ku izipho zomtshato -Ungavumeli umtshakazi wakho abe yedwa kwi-entourage yakhe ngaphandle komnye! Esi sipho sesipho silungele umfazi wexesha elizayo othe phithi ziintyatyambo. Ibandakanya iflask eyenzelwe wena kunye nebhokisi ehambelana nayo ukuyivelisa.
Ifantasticum Iiflask ezenziwe ngokwezifiso zabasetyhini, i- $ 26, Etsy.com
Ukubhala izifungo zesiko? Bakhumbuze ngesi sipho somtshato somyeni wakho. Kubhaliwe ndiya kuprinta amagama akho othando kwisiqwenga esimangalisayo sokuhonjiswa eludongeni. Ikwayindlela entle yokubonisa esinye isiqingatha sakho ngezibhambathiso zabucala osenokungafuni ukuzicengceleza kowona msitho.
Kubhaliwe Iifungo zakho njengoPrinta lobuGcisa, ukusuka kwi- $ 36, IMinted.com
Esinye sezona zipho zibalaseleyo kumfazi wakho wexesha elizayo ngaphambi komtshato? Esi sitshixo sokwenza izinto siyilelwe ukuba sibambe amakhubalo amele iindawo ezahlukeneyo. Ukuphambuka kwiimpawu zazo zonke iihambo zakho ekwabelwana ngazo (kubandakanya iholide yakho emva komtshato) yesipho esimnandi nesinemvakalelo.
Iklabhu yokuHamba I-keychain kunye neethokheni zokuhamba, ukusuka kwi- $ 29, TheGrommet.com
Ukucoca , phunga , hooray! I-Sip unikezela ngemibhiyozo eyahlukeneyo yokubhiyozela isiganeko esikhulu kangaka. Yothusa umtshakazi wakho ukuba abe nebhokisi yesipho se-champagne yexesha elinye, okanye uhambe wonke umfumane isipho esiqhubeka nokunikela: ubhaliso olunobunewunewu obutofotofo. Ngale ndlela, uya kuba namathuba amaninzi okwenza i-toast kubomi obusandul 'ukutshata.
I-Sip izipho, ukusuka kwi- $ 40 kwibhokisi nganye, TheSipSociety.com
Ngokoluvo lwethu, intuthuzelo sesinye sezona zipho zibalaseleyo ezikhoyo. Ewe, isibini esifanelekileyo se- iiteki zomtshato unokuhambisa kanye loo nto. Ukuba ungumntu othanda intetho ekhathalayo, mnike isibini esitsha sokunxiba xa usiya kwikhefu lokutshata, emthendelekweni okanye — kuxhomekeke kwisimbo sakhe somtshato — usuku lonke lomtshato! Ngelixa ukuyo, ungazixakekisa njani ukuzithelekisa ngokwakho? Umthengisi we-Etsy ibonelela ngeendlela ezininzi ze-Instagram ezilungele ukukhetha kuzo.
Tweet N Stitchy izihlangu zomtshato zesiko, ukusuka kwi- $ 130 ngazinye, Etsy.com
indlela yokuthambisa isitshixo sokutshisa
Iwotshi zizipho zomtshato zesintu zomtshakazi nomyeni ngesizathu: Yindlela emnandi yokuthi 'Lixesha!' Kukho iitoni zokhetho kwintengiso, ke jonga into elungele isitayile sakhe. Kodwa ukuba sele uyazi ukuba uyayithanda i-rose yegolide kunye ne-blush, unokufuna ukuphelisa ukukhangela kwakho apha.
Talley kunye neTwine I-41mm yabasetyhini iWorley chronograph inyuke ngegolide w / ibhanti epinki yesikhumba, $ 145, YumYaKi
Ukuba ngandlela thile ufumene lonke ucwangciso lomtshato ngaphandle kokufumana isibini ii-PJs zomtshato lixesha lokuba ugcwalise isikhewu. Lo 'Nkskz. Ihempe yokulala lukhetho olufudumeleyo anokuthi angene kulo ngobusuku bomtshato .
Umtshakazi kaDavid U-Mrs ngaphezulu kweqhosha lokulala ihempe, $ 25, Ngobubele.com
Ziqwalasele ngokwakho ukuthandana? Ke sikufumene isipho somhla womtshato. Iphepha ngalinye kule ncwadi linomdla omnandi nolucingisisiweyo-ugcwalisa izithuba. Okwangoku kuya kuba nobabini nikhumbula ibali lenu lothando. Isilumkiso: kunokubangela iinyembezi zovuyo.
Iimpahla ezingaqhelekanga Ndikuthanda Njani Ukusuka ku-A-Z , $ 20, UncommonGoods.com
UKUYA yomqala ekhethekileyo Sisipho esiqhelekileyo somtshato somtshakazi ovela kumyeni wakhe okanye kumtshakazi wakhe. Lo ubonakalisa umtsalane wedayimani okwimo yakhe (okanye eyakho!) Okokuqala, ukubamba i-chicly kwikhephu egolide emhlophe, emhlophe okanye evulekileyo. Uyakucinga ngemini yakho enkulu nanini na xa enxiba emva koko-nto leyo eza kuhlala ihlala, siqinisekile ngayo.
BYCHARI yomqala yokuqala yedayimane, evela kwi- $ 450, BYCHARI.com
Ukuba sele enebling eninzi, mnike indawo yokugcina. Le venkile ye-Etsy ithengisa ezinye zezona zitya zintle zezakha zabonwa. Thatha uyilo lwezityalo olubonisa zombini ii-initials zakho. Yindawo entle yokubeka amakhonkco akhe xa yena kufuneka azisuse .
Imithombo yeendaba yepeyinti Isipho somtshato esenziwe ngumntu, esivela kwi- $ 17, Etsy.com
Ngenye indlela, khetha le bhokisi yezacholo iphefumlelweyo ibeka i-baubles zakhe embonisweni, ibanike ukukhanya okubafaneleyo. Heck, inokwenza nokuba ibe yeyakho Iifoto zomtshato ezibhaliweyo ! Ibhonasi: Ungayifumana ikrolwe ngesilinganiso esikhethekileyo. Lowo ubonisiweyo uthi, 'Ngokwenene ungoyena mhle kubo bonke.' Njani ukuba isipho somhla womtshato wesithandwa seDisney?
Ivenkile yeKnot Ibhokisi encinci yeglasi yokuhombisa iiglasi, $ 30,
Ukuthenga umbhali? Ijenali ebotshelelwe ngofele inombhalo okwiqweqwe lomxholo othi: 'Ndiyakholelwa ukuba lixesha lolunye ulonwabo.' I-adventure yomtshato, oko kukuthi! Angayisebenzisa ekuyileni izifungo zakhe okanye nakweyiphi na into eyinqwenelayo intliziyo yakhe.
Izambatho zomtshato zasebusika zomtshato ngo-2016
Soothi Ijenali ebhalwe ngesandla yesikhumba endiyikholelwayo lixesha lolunye uhambo, $ 40, TheGrommet.com
Khumbuza ingoma yakho yokuqala yomdaniso (okanye enye ingoma enentsingiselo) ngoluvo lwesipho esimangalisayo: ingoma yokuprinta ubugcisa. Okwangoku kuthanda ukuthanda kwakho umculo ngendlela eyahlukileyo.
Amaza omoya ubugcisa besandi sokuzenzela kwilaphu, ukusuka kwi- $ 70, Etsy.com
Izinto ezinxulumene nokuthandana nobusi zezinye zezipho zomtshato zesintu zomtshakazi, yiyo loo nto sibonisa ezimbalwa kolu luhlu. Le thegi yefeksi yesikhumba iya kuphakamisa umthwalo wakhe (konke ngelixa bembhiyozela entsha yokuqala , ukuba unayo). Ngaba uziva unesisa? Kukho ukuthelekisa kwaye nako. Yibanohambo olumnandi !
Ivenkile yeKnot Ithegi yemithwalo yempahla yesikhumba, $ 12,
Yintoni efanelekileyo ngakumbi kwisipho sangaphambi kokuba uthande ikhandlela eliphefumlelweyo? Olu hlobo ithengisa ivumba elithozamisayo elithozamisayo kunye nolonwabo. Khetha enye yesipho esiyixelela ukuba intlantsi iphila kakhulu kunakuqala.
Amanqaku oThando Inqaku lothando Inombolo yesi-2 yeglasi, $ 30, LoveNotesFragrances.com
Ukukhangela isipho esivela kuwe kuye ngandlela-thile ubhiyozela indawo yakho yomtshato? Kuthekani ngezi glasi zewayini zohlobo oluthile ezihonjiswe kunye nolungelelwaniso lwakho olukhethekileyo? Ukuba unesiselo esahlukileyo sokhetho, umenzi ikwathengisa iikomityi zekampu, iipeyinti kunye neiglasi zamatye. Nantoni na ohamba nayo, ungazisebenzisa ukuthi 'cheers' emtshatweni wakho.
Inkampani yaseSusquehanna yeGlasi isanti ebanzi kunye nobude obungenaziglasi zewayini, i $ 27 ngeseti ye-2, TheGrommet.com
Unombulelo kakhulu ngomhla wokuzalwa kwakhe, kutheni ungawubhiyozeli nje? Ngaba uyazi ukuba yonke inyanga yokuzalwa inxulunyaniswa nentyatyambo (efanayo nokuba ikho njani amatye okuzalwa )? Le ntambo yomqala yenzelwe ukubonisa amagqabi ambalwa kwintyatyambo yakhe yokuzalwa. Sisipho somtshato esicingisisiweyo nesithandanayo somtshato kumtshakazi.
UTulianna kunye noAlejandra Garces inyanga yokuzalwa intyatyambo yentliziyo, $ 48, UncommonGoods.com
Abanye abatshatileyo batshintshana iileta endaweni (okanye ecaleni) kwezinye izipho. Ukuba uyazi ukuba inqaku elibhalwe ngesandla liya kuba yeyona nto inefuthe, esi sisipho esihle somtshato kumtshato wakho. Zininzi kunye namakhadi amaninzi onokukhetha kuwo-nanku umzekelo omnye ongcolileyo. Ukuba niwele ukuhlekisa, umyalezo uyindlela edlalwayo yokuqala usuku lomtshato.
Ndingu-Nat Designs Ndiya kutshata nesiHogo ngaphandle kwakho ikhadi lomtshato elihlekisayo, ukusuka kwi- $ 6, Etsy.com
Ngamanye amaxesha, ufuna isipho esisemthethweni sokuvuma ukuya kumsitho osesikweni. Mphathe ngokunethezeka ngale nto intle ibhalwe ngumbhali wegolide okhwaza ubucukubhede. ( Ndum : Kukho iindlela ezifanayo kwi luhlaza mnyama olungapheliyo , ebomvu ebomvu kunye nokudityaniswa kweminye imibala.)
Kaweco I-AL Sport yomthombo wepeni kuHlelo olulinganiselweyo iRose Gold, $ 80, Greer.com
Amakha ayaziwa ukuvusa iinkumbulo kunye neemvakalelo eziza nazo. Yiyo loo nto siyithanda umbono wokuba umtshakazi enxibe isiqholo esikhethekileyo emtshatweni wakhe. Nanini na xa eyihluma emva koko, iya kubuyisa uvuyo awaziva ngalo olo suku. Ukuba ufuna ukumthengela ibhotile entsha kraca, cinga ukuyikhetha kunye ukuze uqiniseke ukuba uyayithanda. (Wonke umntu unencasa eyahlukileyo, kunye neevumba ezibonisa ukunganyangeki ziyinyani!) Awuqinisekanga ukuba ungaqala ngaphi? Eli vumba lithile liphumelele imbasa yobuhle beKnot.
Gucci Bloom eau de parfum kuye, $ 100, ISephora.com
unxibe ntoni ngomtshato ka-Okthobha
izipho zomtshato kuye
yintoni isipho seminyaka esi-4 sokukhumbula
iibhentshi zethayile yeshawari
iingoma ezingcwaliselwe oonyana koonina
Iindawo ezifanelekileyo zokuthengisa ilokhwe yomtshato